Factory fanatanjahan-tena any ivelany - Mpanamboatra fanatanjahantena any ivelany, mpamatsy
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena ivelany / BS-OS04
Raiso ny tadiny mihantona, azonao alaina amin'ny fanatanjahan-tena any ivelany na aiza na aiza, fanoherana ny filatsahana, fanoherana ny vovoka ary ny rano. Mety ho lalao Bluetooth, lalao U-disk, lalao karatra TF ary lalao AUX. Afaka mankafy mozika, sarimihetsika ary lalao ianao. Miaraka amin'ireo mpandahateny TWS sy ny andian-tsarimihetsika 1 + 1 azonao atao indrindra ny mankafy ny mozika vokatry ny HIFI
Azo ampiasaina ho banky herinaratra vonjy maika izy io rehefa mila herinaratra ny telefaona sy ny solosainao. Ary serivisy antso maimaimpoana ho anao. Fiarahana mahafinaritra ho anao any ivelany.
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena ivelany / BS-OS05
Ity mpandahateny Bluetooth mamirapiratra ity dia manana fiasa mahery vaika ', filalaovana Bluetooth, filalaovana karatra TF, antso an-tanana, fiasan-jiro, asan'ny banky herinaratra, onjam-peo FM. Natao ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany, fanoherana ny orana, fanoherana ny vovoka ary ny fanoherana. Mety amin'ny fotoam-pialam-boly sy asa birao ihany koa io.
Izy io dia manohana ny famoahana mozika endrika MP4 / WMA / WMV mahazatra ary milalao. Miaraka amin'ny vahaolana Bluetooth 5.0 + EDR, mitondra fampitana feo tena marin-toerana, in-3 ny fampitana hafainganana mahazatra. Ary diaphragm subwoofer, diaphragm basse indroa, mampiseho feo ambany matetika, manao bas-mahery matanjaka kokoa.
Fitaovana jiro fanilo LED, maody miasa 3: famirapiratana avo / ambany ary SOS, mifanaraka amin'ny filanao ivelany rehetra. Amin'ny alàlan'ny bisikileta sy fehin'ny bisikileta no ahafahanao miantso maimaimpoana miantso mozika rehefa mitaingina na mihaino radio FM.
Izy io dia manana fiasa tsy manam-paharoa, ahafahan'ny mpandahateny mahatadidy ny toerana filalaovana farany avy amin'ny karatra TF ary mandeha ho azy avy hatrany.
Miaraka amin'ny bateria 4000mAh, miasa toy ny banky mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny telefaona na fitaovana elektrika misy anao koa rehefa misy vonjy maika. Ny bateria fahaiza-manao lehibe koa dia manohana ny mozika hatramin'ny 10hrs. Mpandahateny multi-miasa mety ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany izy io.
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena ivelany / BS-OS06
Ity mpandahateny Bluetooth modely ity dia natao loko mazava ho an'ny safidy. Izy io dia azo lalaovina amin'ny Bluetooth, milalao U-disk, milalao karatra TF ary nilalao AUX. Azo alaina mozika endrika MP4 / WMA / WMV mahazatra io. Miaraka amin'ny vahaolana Bluetooth 5.0, mifanaraka amin'ny fitaovana Bluetooth 99% izy io, ary mitondra fampitana feo tena marin-toerana. Ary ny subwoofer 3D HIFI manodidina ny feo sy ny TWS connection 1 + 1 dia ahafahanao mankafy ny vokatra tsara indrindra azonao atao amin'ny fitenenana Bluetooth.
Natao indrindra ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany, fanoherana ny orana, fanoherana ny vovoka ary ny fanoherana. Mety amin'ny fotoam-pialam-boly sy asa birao ihany koa io. Tsy ny mozika ihany, fa azo alaina ho an'ny FM koa.
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena an-kalamanjana / BS-OS07
Ny mpandahateny Bluetooth any ivelany dia misy endrika sy loko miloko tsara, ary miaraka amin'ny fahatsapana fonosana vita amin'ny silika nofonosina tanana. Miaraka amin'ny fiasa mitambatra amin'ny mozika, antso an-tanana, radio FM ary jiro fanilo LED. Afaka milalao mozika ianao amin'ny alàlan'ny fifandraisana Bluetooth, U-disk, karatra TF ary ny fifandraisana AUX, azo alaina amin'ny endrika MP4 / WMA / WMV. Miaraka amin'ny vahaolana Bluetooth 5.0 ianao dia tsy niahiahy momba ny fampitana haingana, dia ho faly amin'ny hafainganam-pandeha malama sy ny feon'ny bas mavesatra ianao.
Natao manokana ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany, porofon-drano, fanoherana ny vovoka ary ny filatsahana. Ny jiro fanilo LED dia manana maody 3, mamiratra, malemy ary SOS, manome fahafaham-po izay ilainao rehetra rehefa eny ivelany.
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena ivelany / BS-OS08
Ilay mpandahateny blueberie camouflage tsara tarehy miloko mazava ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany. Izy io dia mety ho mpihazona napetraka amin'ny bisikileta alefa raha mety tsara. Anti rano, anti dropping, anti vovoka. Ny jiro fanilo LED dia manana fomba 3, mahery, malemy ary SOS, ampy ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany.
Afaka mankafy feo manodidina ny subwoofer 3D HIFI ianao. Izy io dia mandray impulsator tsy dia be loatra, mampihena ny tabataba. Kanto kokoa, milamina kokoa ary mavitrika kokoa.
Afaka mankafy sarimihetsika, hira ary radio FM miaraka aminy ianao. Azo ampiasaina amin'ny filalaovana bluebooth, lalao karatra TF ary lalao AUX ary azo alaina ho an'ny format MP4 / WMA / WMV mainstream. Izy io dia ho mpiara-miasa an-kalamanjana. Mazava ho azy fa azo ampiasaina amin'ny fialam-boly sy birao koa izany.
Ity mpandahateny bluetooth endrika kanto ity dia tian'ny voalohany amin'ny bika aman'endriny. Safidy miloko maro mahafinaritra, ny lokon'ny camouflage samy hafa dia mifanaraka tanteraka amin'ny hetsika ivelany, ary endrika tsy manam-paharoa, volon-drongony tsy misy tantera-drano vita amin'ny lamba nilon-drano antsasa-tanana mahatsapa firakotra vita amin'ny fingotra, fehin-tànana vita amin'ny hoditra. Mampitombo ny fahafinaretanao izany rehefa mampiasa azy io.
Ny feo subwoofer 3D HIFI manodidina azy miaraka amina mpandahateny roa sosona dia hahatonga anao hankafy azy io. Vokatry ny feo stereo miaraka amina bas feno — ny mpandahateny dia mamoaka feo miroboka miaraka amina bass rich, mids ary avo, feo effets dynamique. Na ny habetsaky ny ambony indrindra, mitovy amin'ny fijerena sinema. Ho tianao ny tena Stereo Sound 360 °. Azo ampiasaina amin'ny filalaovana Bluetooth, lalao U-disk, lalao karatra TF ary lalao AUX. Afaka mankafy mozika, sarimihetsika ary antso an-telefaona MP4 / WMA / WMV ianao.
Ny taranaka nohavaozina ny teknolojia Bluetooth 5.0, ny fanjifana herinaratra ambany noho ny Bluetooth 4.2 teo aloha fa miaraka amin'ny fandefasana haingana kokoa, ny fahaiza-manao fanoherana mahery vaika ary ny mari-pamantarana marimaritra kokoa tsy misy hatak'andro. Ity mpandahateny ity dia mifanaraka amin'ny fitaovana marobe toa ny takelaka, solosaina finday, solosaina birao ary finday.
Natao manokana ho an'ny fanatanjahantena an-kalamanjana, fanoherana ny orana, fanoherana ny vovoka ary ny fanoherana. Ny mpandahateny azo entina dia tsy misy tariby mba hahafahanao mihaino mozika mandritra ny fiainanao an-kalamanjana sy mandritra ny dia. Mazava ho azy fa mety amin'ny fotoam-pialam-boly sy birao koa.
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena ivelany / BS-OS10
Ity mpandahateny Bluetooth modely ity dia noforonina toy ny siramamy goba, fa ny zoro boribory rehetra, sary mahafinaritra ary mifanaraka amin'ny lokon'ny camouflage miloko. Izy io dia manana fanamafisam-peo roa 52mm eo anoloana sy any aoriana, izay mamoaka feo amin'ny alàlan'ny horonantsary manokana, mahatonga ny mozika ho 3D sy mazava kokoa.
Natao indrindra ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany misy fehin-tanana sy fanoherana rano, fanoherana ny vovoka, fanoherana. Azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny fotoana fialan-tsasatra sy any amin'ny birao koa, mankafy sarimihetsika sy mozika afaka miantso maimaimpoana miaraka amin'ny havana aman-tsakaiza. Hitondra fiainana tsara kokoa ho anao izany.
Azo ampiasaina amin'ny filalaovana Bluetooth, lalao U-disk, lalao karatra TF ary lalao AUX. Miaraka amin'ny vahaolana Bluetooth 5.0, mifanaraka amin'ny fitaovana Bluetooth 99% izy io, ary mitondra fampitana feo tena marin-toerana, hiantohana ny vokan'ny bas mavesatra.
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena ivelany / BS-OS11
Ity maodely telozoro varingarina endrika Bluetooth mpandahateny ity dia natao ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany, miaraka amin'ny fehikibo azo ahitsy, porofon-drano, fanoherana vovoka, fanoherana. Afaka mankafy mozika ianao mandritra ny fialamboly na fitsangantsanganana, na mankafy antso an-tanana maimaimpoana rehefa mibodo ny tananao.
Izy io dia manana bateria mahazaka lehibe, ary ny feony manodidina ny 3D HIFI izay manana subwoofer dia ahafahanao mankafy ny vokatra tsara indrindra mety ananan'ny mpandahateny Bluetooth. Hahafinaritra anao tanteraka ny dia sy fialan-tsasatrao.
Izy io dia azo lalaovina amin'ny Bluetooth, nilalao karatra TF, nilalao U-disk ary nilalao AUX. Azo alaina mozika endrika MP4 / WMA / WMV mahazatra io. Miaraka amin'ny vahaolana Bluetooth 5.0, mifanaraka amin'ny fitaovana Bluetooth 99% izy io, ary mitondra fampitana feo tena marin-toerana.
Mitombo Ligh, Mamboly hazavana, Jiro zavamaniry, Mitombo ny avotra, Mitombo Lightin, Mamboly Lightin ny zavamaniry,